‘बारी बेचेर नेप्टे बनाएँ’ : निर्माता रोहित रुम्बा « Ramailo छ
‘बारी बेचेर नेप्टे बनाएँ’ : निर्माता रोहित रुम्बा
प्रकाशित मिति : Apr 10, 2018
समय : 5:13 pm
यही शुक्रबार फिल्म ‘नेप्टे’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रदीप खड्काको ‘लिलिबिली’ सँगै लाग्ने यो फिल्मले राम्रो व्यापार गर्ला त ? ‘राम्रो व्यापार गर्यो भने आइतबार नै अर्को फिल्म बनाउने घोषणा गर्छु’, ‘नेप्टे’ का निर्माता तथा कलाकार रोहित रुम्बा भन्छन् । यदि राम्रो व्यापार गरेन भने ?
‘नेप्टे चलेन भने म चार पाँच वर्ष यो लाइनमा आउँदिन’, मलिन अनुहारमा रोहितले सञ्चारकर्मी माझ भने, ‘मलाई बन्धकी राखेको बारी कसरी निकालुँ भन्ने चिन्ता हुन्छ । काम गरेर बारी निकालेर मात्रै आउँछु । फिल्म चाहिं बनाउँदिन् ।’ ‘नेप्टे’ बनाउँन भक्तपुरको डेढ रोपनी बारी बेचेको र बाँकी बन्धकी राखेको रोहितले खुलाए ।
‘मलाई पनि दर्शकले चिनुन् भन्ने छ । मेरो या ड्रिम प्रोजेक्ट हो’, झण्डै डेढ दशकदेखि फिल्म क्षेत्रमा रहेका रोहितले भने । फिल्ममा उनी हिरो कान्छा अर्थात् झिल्के हिरोको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । देव कुमार श्रेष्ठ निर्देशित फिल्ममा बुद्धि तामाङले फिल्मको रोल आफु जस्तै रहेको बताए । रोहित र बुद्धि सँगै फिल्ममा दयाहाङ राई, छुल्ठिम गुरुङ, पूर्णिमा लामा लगायत कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
यस्तै चैत ३० गते नै प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘लिलिबिली’ सँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको उनले बताए । ‘५८ वटा हल फिल्मले पाउँछ । मैंले उताको वितरकसँग कुरा गरेरै फिल्म रिलिज गर्न लागेको हुँ’, रोहितले खुलाए ।
रचना रिमाललाई हारले दियो सुख ! (भिडियो)
प्रदीप र पूजाको ‘जुलेबी’ रोमान्स (भिडियो)
‘बुलबुल’ निर्देशकले ६ करोडमा ‘रबर सिटी’ बनाउने
बिहे गरेको १३ वर्ष पुग्दा धुर्मुस सुन्तलीको जीवन सजियो
अमेरिका बस्ने सुधाम्शु ‘एक्स नाइन’मा अनुबन्धित